Telefoonada ugu sareeya iyo kuwa dhex-dhexaadka ah ee ugu waxqabadka wanaagsan xilligan | Androidsis
Sida caadiga ah, AnTuTu badanaa waxay sameysaa warbixin bille ah ama, halkii, liistada boosteejooyinka ugu awooda badan suuqa, bilba bil. Sidaa darteed, fursadan cusub waxaan ku tusinaynaa bisha ay tahay Janaayo ee sanadkan, taas oo ah tii ugu dambeysay ee lagu soo bandhigo halbeegga. Aan aragno!
1 Kuwani waa taleefannada leh waxqabadka ugu wanaagsan Febraayo
Kuwani waa taleefannada leh waxqabadka ugu wanaagsan Febraayo
Liiskan ayaa dhowaan shaaca laga qaaday oo, sida aan iftiiminno, iska leh bishii Janaayo ee la soo dhaafay, taas oo ah sababta AnTuTu ay u rogi karto tan tan qiimeynta soo socota ee bishaan, taas oo aan arki doonno bisha Maarso. Waa kuwan kuwa casriga ah ee ugu awoodda badan maanta, sida ku xusan barxadda tijaabada:
Maaddaama lagu faahfaahin karo liiska aan kor ku soo lifaaqnay, cusub iQOO 7 iyo Xiaomi Mi 11 waa labada xayawaan ee ku kala yaal labada boos ee hore, oo leh 728.784 iyo 705.593 dhibcood, siday u kala horreeyaan, iyo farqiga farqiga u dhexeeya ee aan aad u weyneyn. Telefoonada casriga ee Amos waxay leeyihiin dhamaan awooda ay Qualcomm's Snapdragon 888 mobile platform bixin karto, waxaa xusid mudan.
Kaalinta saddexaad, afraad iyo shanaad waxa fadhiya Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 40 iyo Oppo Reno5 Pro + 5G, oo leh 702.553.408, 688.043 iyo 671.249 dhibcood, siday u kala horreeyaan, si loo xiro shanta meelood ee ugu horreysa liiska AnTuTu iyadoo la kobcayo. Liiska bishii hore: 10ka ugu sareeya moobiillada ugu waxqabadka fiican xilligan]
Ugu dambeyntiina, qeybta labaad ee miiska wuxuu ka kooban yahay iQOO 5 (665.959), Redmi K30S Edition aad u ba'an (664.993), iQOO 5 Pro (664.252), Vivo X50 Pro + (663.766) iyo Xiaomi Mi 10 Xus Xus daran ( , Si isku mid ah, lixaad ilaa meel tobnaad.
Si ka duwan liiskii ugu horreeyay ee horey loo sharraxay, oo ay ku badan yihiin Qualcomm iyo Huawei chipsets, liiska maanta 10-ka taleefannada dhexe ee ugu sarreeya ee ugu waxqabadka wanaagsan Janawari 2021 ee AnTuTu sidoo kale waxay leedahay taleefannada casriga ah oo leh processor-ka MediaTek. Samsung's Exynos, sidii daabacadihii la soo dhaafay, meelna laguma arko markan.
Kadib Redmi 10X 5G, kaas oo ku guuleystey inuu dhaliyo heer sare oo ah 401.389 waxaana ku shaqeeya Mediatek's Dimensity 820, the Redmi 10X Pro 5G, taas oo sidoo kale ay ku shaqeysay kor ku xusan Dimensity 820, ayaa lagu meeleeyaa booska labaad, iyadoo leh dhibco dhan 398.264. Tan waxaa ku xiga Huawei New 7, oo leh dhibco dhan 395.463. Midda dambe waxay la shaqeysaa Kirin 985.
Taleefannada Huawei Nova 7 Pro, Honor 30 iyo Honor X10 waxay xaqiijiyeen boosaska afraad, shanaad iyo lixaad, siday u kala horreeyaan, oo leh tirooyin 394.913, 390.862 iyo 361.347. The Huawei Nova 7 SE waxay ku jirtaa booska toddobaad, oo sumadeedu tahay 352.728 dhibcood.
ka Oppo Reno5 5G iyo Redmi Xusuusin 9 Pro 5G Waxay ku jiraan booska siddeedaad iyo sagaalaad, oo leh 349.329 iyo 347.876, siday u kala horreeyaan. Midka hore waa taleefan casri ah oo lagu qalabeeyay Snapdragon 765G oo awood badan, halka kan dambe la bilaabay Snapdragon 765G, halka Redmi lagu qalabeeyay Qualcomm's Snapdragon 750G.
El Realme Q2 Pro 5GIyada oo loo yaqaan 'Dimensity 800U' iyo mid aan la tixgelin karin oo ah 337.545 dhibcood oo laga helay barta tijaabada, waa taleefankii ugu dambeeyay uguna dambeeyay ee ku jira liiska Mediatek's Dimensity 800U chipset.
Noocyada kaladuwan ee Chipset-ka ee aan ka helno liiskan ayaa iska cad. Waxaa jira shan qof oo jooga, Mediatek waa midka maamusha inuu la joogo meesha ugu horeysa ee miiska, taasoo u oggolaaneysa Kirin-ka sharafta leh ee Huawei, oo leh shan fagaarayaal la deggan yahay, iyo dalool yar Qualcomm, oo dadaal xoog leh ku guuleysatay inay gasho darajadan. Weli waa la arki doonaa sida Qualcomm uu u soo ceshado sanduuqyada qeybtaan, oo xoogaa looga qaaday qiimeyntii u dambeysay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Kuwani waa taleefannada ugu waxqabadka fiican maanta